Ukhuseleko olunamandla amakhulu okuxabisa kwi-Ibex 35 | Ezezimali
Ukhuseleko olunamandla amakhulu okuxabisa kwi-Ibex 35
Kwintsalela yonyaka, isalathiso esikhethiweyo sama-equities kazwelonke, i-Ibex 35, xa iyonke inokubanakho ukuphinda ihlaziywe kumaxabiso ayo phantse ali-16%, ngokwemvumelwano yeReuters. Kodwa ngokungahambelani kakuhle kubameli babo okoko okwangoku kukho amaxabiso anokubakho okungalunganga. Ngelixa ngokuchaseneyo, malunga neepesenti ezingama-20 zeenkampani zibonisa indlela enokubakho enyukayo engama-30%. Oko kukuthi, umahluko obaluleke kakhulu ukusuka kwixabiso elinye ukuya kwelinye kwaye unokuthatha isigqibo ngenzuzo esiza kuyifumana kutyalo-mali ukusukela ngoku.
Kwelinye icala, kukho uthotho lwamaxabiso esitokhwe ahamba phambili anokuthi abaluleke ngakumbi kwimisebenzi esiza kuyenza ukusukela ngoku. Ngokucacisa ngokucacileyo kuyo yonke imigaqo esisigxina: imfutshane, iphakathi kwaye inde. Ngale ndlela banokuthi ngokungathandabuzekiyo bandise ixesha lokuphinda bavavanye esele babelwe ngabarhwebi bezemali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba banokonyuka phakathi kwe-20% kunye ne-30% kuvavanyo lwabo kwiimarike ze-equity.
Enye into ekufuneka ilungisiwe ukwakha iphothifoliyo yotyalo Licandelo abakulo. Kungenxa yokuba abanye abaza kugcina isimilo esingcono kunabanye. Ngabo abo imisebenzi yethu kwiimarike zezabelo kufuneka ibhekiswe kubo. Kungenxa yokuba umkhwa ubaluleke kakhulu kwiparameter yokukhetha amaxabiso oza kwenza ngawo ukuba ulondolozo lube nenzuzo ukusukela ngoku. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
1 Ukhuseleko lwe-Ibex olunamandla amakhulu
2 Ukunyuka kwamaxabiso asimahla
3 Ingozi yendlela eqhelekileyo
4 Vumela inzuzo iqhubeke
5 Zama ukungazenzi iimpazamo
6 Ukugcina imali kwii-commissions
Ukhuseleko lwe-Ibex olunamandla amakhulu
Ngaphakathi kwesi sivumelwano seReuters, phakathi kwezokhuseleko ezinamandla amakhulu okwenyuka kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain zezi zilandelayo iinkampani esiza kuzichaza apha ngezantsi. I-Ence, ArcelorMittal, IAG, Caixabank, Más Móvil, Banco Sabadell kunye ne-Bankia okwangoku Ukuhlaziywa kokulindelwe phantse ngama-30%. Ke imbuyekezo kutyalo-mali olutyalomali inokwanelisa kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokukodwa ukuphela konyaka okanye mhlawumbi kunyaka olandelayo.
Ayizizo zindaba zimnandi kuphela kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuba akunjalo, kwelinye icala, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba icandelo elilungileyo leetshipsi eziluhlaza zesizwe ngoku zinembuyekezo enomdla kakhulu kwinqanaba le-15%. Njengakwiimeko ezithile ze Repsol, Telefónica, Banco Santander kunye neBBVA, phakathi kwezinye ezibaluleke kakhulu. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo banokuthi basebenze njengezinto ezikhuthazayo zokuphucula umfutho kwi-Ibex 35. Ukuya kwinqanaba lokuba ingoyisa ukumelana okubalulekileyo ekuyo kwinqanaba le-9.500.
Ukunyuka kwamaxabiso asimahla
Kananjalo asinakulibala ngeli xesha amaxabiso esitokhwe akumaxabiso angawona aphezulu, ukunyuka kwamahala. Oko kukuthi, ngovavanyo oluphezulu kakhulu olunokubakho kwaye kungabikho mda kwindlela yalo ephezulu. Phakathi kwezinye izizathu ngenxa yokuba abasenakho ukuxhathisa ngaphambili kwaye sele bekhona Kuphela kufuneka banyuke, benyuka ekubekeni amaxabiso akho. Amanqanaba angaziwayo kwinxalenye elungileyo yabahlalutyi kwiimarike ze-equity. Ayilolize, banayo yonke into yabo ukuba baqhubeke nokunyuka kwizikhundla kwiimarike zezemali kwaye ngaphandle kolunye uhlobo lwemida.
Kwixabiso elikwimeko yobuchwephesha yokunyuka lininzi kwaye lisuka kumacandelo emarike eyahlukeneyo. Nangona elinye lamatyala acacileyo yile Endesa yombane emva kokugqitha kumanqanaba angama-23 euros izabelo. Ngale ndlela, akukho mathandabuzo ukuba izabelo zabo zinokuya ngokugqibeleleyo ukuya kwi-27 euros ubuncinci. Ngaphandle kwento yokuba ixabiso layo lingaphezulu koqikelelo lwabahlalutyi bezemali ukuba liya kuba malunga ne-21 okanye i-22 ye-euro ngesabelo ngasinye. Ngokwahluka ukuba ngamanye amaxesha okanye kwelinye kungalahlekisa izicwangciso ezenziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ingozi yendlela eqhelekileyo
Zonke ezi paramitha zinokusenza sicinge ukuba ngokwenyani i-Ibex 35 inokufikelela kumanqanaba aphezulu kwiinyanga ezizayo kunokuba kungoku nje. Ngokukodwa ukuba uqikelelo lwabahlalutyi beemarike zezabelo luhlangatyezwa ukusukela ngoku. Nangona esi sesinye isihloko esahlukileyo nesangaphandle kumxholo weli nqaku kwaye siza kuchaza kwezi nyanga zilandelayo.
Ngayiphi na imeko, owona mngcipheko mkhulu xa usebenzisa esi sicwangciso kutyalo-mali uhlala kwinto yokuba inokuba njalo ukuwohloka kwemeko yesalathiso sesitokhwe. Ngokubuyela umva ngokunzulu ukuze la manqanaba abe nokufezekiswa kwixabiso, ngakumbi xa kukho ukubakho kokuphakama okuphezulu kakhulu kulindelo lwabo. Njengakule miba ikhankanywe ngasentla kwaye inokuba yinto ekuthengwe ngayo kwimisebenzi eyenziweyo kwiimarike zezabelo.
Vumela inzuzo iqhubeke
Xa ikwixabiso lentengo, esona sicwangciso silungileyo sokufumana inzuzo enkulu kwimarike yemasheya kukuba "iqhubeke" ngexabiso layo kwaye, ngenxa yoko Fumana eyona nzuzo inkulu kude kube yinkampani edwelisiweyo yeempawu zokuqala zokuphela kwimo yayo. Kule ntsebenzo kulula ukungena kuyo, kufuneka kuphela ukuba uqaphele ukuba ixabiso ekuthethwa ngalo likwinkqubo yokwanda, kodwa kubunzima obukhulu ukushiya izikhundla kwaye uthathe ithuba elipheleleyo lenkqubo ephezulu, kuba ngokwezibalo kunjalo Akunakwenzeka ukuyigubungela yonke inkqubo apho umqondiso onokukumema ukuba uthengise ukhuseleko uya kuba xa ubhalwe kwiindawo ezikufutshane nokumelana.
Kwakhona uphawu lokuthengisa kunye umthamo wokuqesha onamandla Inokuba lixesha lokushiya utyalo-mali kunye nokuqokelela iingeniso zemali ezihlanganisiweyo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba zonke iinkqubo ze-bullish, ezinjengeebhere, zinomhla wokuphelelwa lixesha, ngaphezulu okanye kancinci ixesha elide, eliyeyona ngxaki iphambili kubatyali mali abancinci nabaphakathi, besazi indlela yokufumana umzuzu wotshintsho kwimo.
Zama ukungazenzi iimpazamo
Ngelixa, kwelinye icala, imisebenzi yentengiso yesitokhwe kufuneka ithintelwe kwiimeko zokudodobala koqoqosho lwamanye amazwe, iingxaki ezinkulu ze-geo okanye amaxesha okungaqiniseki kwezoqoqosho ngokubanzi. Kule meko kubhetele ukungahambi kuba ngokuqinisekileyo kuya kubakho amaxesha angcono okutyala imali esiyigcinileyo ngokhuseleko olukhulu. Kungenxa yokuba asinakulibala ukuba akufuneki sisoloko sityala imali esiyigcinileyo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kulungile kakhulu sinike ikhefu ukuze sicingisise into esiyenzileyo ekurhwebeni kwiimarike zezabelo. Ukuze ngale ndlela sikwazi ukubalungisa ngokusebenza kunye nokulingana.
Imarike yemasheya licandelo apho sibeka emngciphekweni imali eninzi kwaye ke kufuneka sicinge ngesigqibo sokungena kwiimarike zezemali. Phakathi kwezinye izizathu, kuba sinokushiya imali eninzi kuyo yonke imisebenzi kwaye le yinto ayinxalenye efanelekileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi abanakho ukuyifumana. Ke ngoko, akufuneki sihanjiswe amarhe angenasiseko okanye anomdla nje kwaye asazi ukuba bavelaphi kwaye banokukhokelela ngaphandle kwamathandabuzo ukuba utyalomali olwenziwe ngaphandle kobugcisa okanye ulwakhiwo lungasenzakalisa kakhulu ukusukela ngoku. Ukuya kwinqanaba lokuba kwiimeko ezininzi zikhokelela kwisiphelo esingacetyiswanga kwiiseyi ezincinci neziphakathi.
Ukugcina imali kwii-commissions
Ingakumbi abatyali mali abenza imisebenzi emininzi ngonyaka, zombini ezijolise kwixesha elifutshane, eliphakathi okanye elide, banokufumana amaxabiso emarike yemasheya aqala ukuthengiswa ngamaziko emali ngakumbi nangakumbi, avumela ukonga okubalulekileyo ngokwemigaqo. yeeKhomishini zomsebenzi owenziweyo. Ireyithi yakho ikhoyo phakathi kwama-10 nama-20 eeyuro ngenyanga, kunye nomntu owenza imisebenzi emine ngenyanga, umzekelo, ukonga kunokuthetha malunga ne-30 ye-euro ngenyanga nge-avareji, eyanceda nokwandisa utyalo-mali.
Ireyithi ethe tyaba kwimarike yemasheya, kwelinye icala, ivumela umsebenzisi ukuba enze imisebenzi yokuthenga nokuthengisa njengoko befuna, njengoko kunjalo ngomnxeba okanye kwi-Intanethi. Nangona ukusetyenziswa kwayo kungasasazekanga kakhulu kwicandelo lezemali, ikakhulu ligubungela iibhanki kunye neebhanki zokonga ezisebenza kwi-Intanethi nakwi okanye abarhwebi, kuzwelonke nakwamanye amazwe, zezona zibonelela ngeemeko ezilungileyo. Ngoncedo onokuthi wenze kulo msebenzi kangangoko ufuna ngenyanga, ngaphandle kwalo naluphi na uthintelo okanye umda. Ngokonga kwangoko kwimali eseleyo yeakhawunti kwaye oko kunokuphucula kancinci kancinci minyaka le. Ukuya kwinqanaba lokuba kwiimeko ezininzi zikhokelela kwisiphelo esingacetyiswanga kwiiseyi ezincinci neziphakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ukhuseleko olunamandla amakhulu okuxabisa kwi-Ibex 35
Ence ngokuxhomekeke ekuvalweni kweselulosi yePontevedra